အသက်ရှင်လျက် ဦး နှောက်တွင် dendritic ကျောရိုးများ၏ Spatiotemporal ဒိုင်းနမစ် (2014) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
အသက်ရှင်သောဦးနှောက်ထဲမှာ dendritic ကျောရိုး၏ Spatiotemporal ဒိုင်းနမစ် (2014)
Chia-Chien Chen က,1 Ju လူး,2 နှင့် ရီ Zuo1,*
1မော်လီကျူး, ဆဲလ်များနှင့် Developmental ဇီဝဗေဒဌာန, Santa Cruz, Santa Cruz,, CA, USA မှာကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်
2ဇီဝသိပ္ပံဌာနနှင့်ဂျိမ်းစ်အိပ်ချ် Clark ကစင်တာ, စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်, စတန်းဖို့ဒ်,, CA, USA
တပ်ဦး။ Neuroanat, 09 မေလ 2014 ။ | Doi: 10.3389 / fnana.2014.00028
Dendritic ကျောရိုးဟာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်ထဲမှာအများဆုံး excitatory synapses ၏နေရာအနှံ့ postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရှင်အလုပ်လုပ်တဲ့ synapses ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။ မကြာသေးမှီကအကျင့်ကိုကျင့်အမှတ်တရများ၏အာရုံခံနိုင်တဲ့ coding ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တိုးတက်လာကျောရိုးဒိုင်းနမစ်လေ့လာဖို့သုတေသီများ enabled ပါပြီ Vivo အတွက် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဇီဝကမ္မနှင့်ရောဂါဗေဒအခြေအနေများအောက်တွင်။ ကျနော်တို့ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်၏ spatiotemporal ပုံစံများပိုကောင်းနားလည်မှုအသက်ရှင်ဦးနှောက်ထဲမှာအတှေ့အကွုံ-မှီခို circuit ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အခြေခံမူ elucidate ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
keywords: dendritic ကျောရိုး, Vivo အတွက်နှစ်ခု-ဖိုတွန်ပုံရိပ်, အတွေ့အကြုံ-မှီခို plasticity, အာရုံကြော circuit ကို, ဦးနှောက် cortex
Dendritic ကျောရိုး (ထက်ပိုမိုရာစုနှစ်တစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့စန်တီယာဂို Ramon y က Cajal နေဖြင့်၎င်းတို့၏ကနဦးဖော်ပြချက်ကတည်းကအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များ၏စှဲမသားစဉ်မြေးဆက်တိုRamon y က Cajal, 1888) ။ ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောထွက်ပေါက်များသည် dendritic shaft မှထွက်ပေါ်လာသော Cajal ၏ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားသည့်“ ဆူးပင်များသို့မဟုတ်ကျောရိုးတိုများ” နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့သည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိုမှုအစုအဝေး၏ (90%) ၏ postynaptic site များဖြစ်ပြီး postsynaptic အချက်ပြခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမော်လီကျူးအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျောရိုးနှင့်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်သည် Synaptic ဆက်သွယ်မှုနှင့် ၄ င်းတို့၏ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအတွက်ညွှန်ကိန်းများအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။Segal, 2005; တံတားနှင့် Sheng, 2006; အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်နှင့် Dunaevsky, 2007).
အများစုမှာ dendritic ကျောရိုးအပေါ်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအလင်းသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန် microscopy (နဲ့အတူပုံသေအာရုံကြောတစ်ရှူးလေ့လာLund et al ။ , 1977; Woolley et al ။ , 1990; Harris ကနှင့် Kater, 1994; ဤနေရာတွင်နှင့် Sheng, 2001; Lippman နှင့် Dunaevsky, 2005) ။ သူတို့ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးအကြောင်းကိုအခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပေမယ့်အဲဒီ fixed တစ်ရှူးစာမေးပွဲသာကျောရိုး၏ငြိမ် "ရိုက်ချက်" ဖမ်းမိ။ ချောင်းတံဆိပ်ကပ်နည်းစနစ်နဲ့ multi-ဖိုတွန် microscopy ၏နိဒါန်းကိုလယ်တော်လှန်ခြင်း။ 2002 နှစ်ခုဓါတ်ခွဲခန်းကနေရှေ့ဆောင်အလုပ် (ခုနှစ်တွင်Grutzendler et al ။ , 2002; Trachtenberg et al ။ , 2002) အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာကာလ (ဆိုလိုသည်မှာရက်သတ္တပတ်) ကျော်နေထိုင်နေဦးနှောက်ထဲမှာအတူတူပင်ကျောရိုးကိုခြေရာခံဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နိယာမမှာတော့ကျောရိုးဒိုင်းနမစ် synapses ဒိုင်းနမစ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တည်ငြိမ်ကျောရိုးအများစု Synaptic အဆက်အသွယ်ကိုယ်စားပြုနေစဉ်, ယာယီကျောရိုးကိုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းခဏတာ Synaptic အဆက်အသွယ်ကိုယ်စားပြု, သူတို့၏ကျန် (ပျက်ကွက် synaptogenesis ကိုယ်စားပြုTrachtenberg et al ။ , 2002; Knott et al ။ , 2006; ကြံ et al ။ , 2014) ။ , ကျောရိုးပုံစံကိုကျယ်စေ, ကျုံ့နှင့်တိရစ္ဆာန်ရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်: ထိုကဲ့သို့သောအချိန်-ချုံးပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကျောရိုးတစ်ပြောင်းလဲနေသောရုပ်ပုံပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင်မိမိတို့၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဒိုင်းနမစ်အာရုံခံအမျိုးအစားများအနက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံဆွနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်း, သင်ယူခြင်းအမျိုးမျိုး Paradigm (အဖြစ်အတွေ့အကြုံများမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားHoltmaat နှင့် Svoboda, 2009; ဖူနှင့် Zuo, 2011).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကနေရလဒ်တွေကိုအာရုံစိုက် Vivo အတွက် ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ။ ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်ခြုံငုံသောအပြောင်းအလဲများနှင့်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးဖြစ်ပေါ်ရှိရာ dendrite လျှောက်တိကျတဲ့တည်နေရာ: ကျောရိုးဒိုင်းနမစ် characterizing ခုနှစ်, သုတေသီများအဓိကအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုရှုထောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ ကျောရိုးသိပ်သည်းဆဟာ postsynaptic အာရုံခံဆဲလျပေါ်သို့ excitatory synapses ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏တစ်ဦးအနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေချိန်မှာတစ်ကျောရိုး၏တည်နေရာကို (Soma မှာဘက်ပေါင်းစုံတုံ့ပြန်မှုရန်၎င်း၏ Synaptic မှတဆင့်ကူးစက်သောလျှပ်စစ်နှင့်ဓါတုအချက်ပြမှုများ၏ပံ့ပိုးမှုများသြဇာလွှမ်းမိုးNevian et al ။ , 2007; Spruston, 2008) ။ ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်အခင်းအကျင်းအတွက်တိကျတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်၏ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မ features တွေနှင့်အတူပတျသကျဘယ်လိုနားလည်ခြင်းဦးနှောက်ထဲမှာသတင်းအချက်အလက်တွေအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိုလှောင်မှုယန္တရားများ၏ elucidation ဖို့အရေးကြီးသည်။
DEVELOPMENT အတွင်းမှာ Dynamic ကျောရိုး
ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ (ဖွယ်ရှိအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် function ကို၏မတူကွဲပြားမှုထင်ဟပ်အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်Nimchinsky et al ။ , 2002; Ballesteros-Yanez et al ။ , 2006) ။ ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအကြားချိန်ခွင်လျှာကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲဆုံးဖြတ်သည်: တစ် dendritic အစိတ်အပိုင်းတစ်လျှောက်ဖျက်သိမ်းရေးကျော်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးတစ်ပိုလျှံကျောရိုးသိပ်သည်းဆပလ္လင်နှင့်အပြန်အလှန်တိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါနှောက် cortex ခုနှစ်, dendritic အကိုင်းအခက် (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအများအားဖြင့်တည်ငြိမ်နေစဉ်Trachtenberg et al ။ , 2002; Mizrahi နှင့် Katz, 2003; Chow et al ။ , 2009; Mostany နှင့် Portera-တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, 2011; Schubert et al ။ , 2013), ကျောရိုးအဆက်မပြတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်နေကြသည်။ ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက် Non-monotonic အပြောင်းအလဲတချို့အတွက်ရရှိလာတဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးပြောင်းလဲမှု၏နှုန်းထားများ, (ဂဏန်း Figure11) ။ ဥပမာအားဖြင့်, တဖြည်းဖြည်း postnatal တစ်ရက်အကြား Motilal (ကျောရိုး၏ elongated နှင့်အတိုကောက်) နှင့် (လာဘ်နှင့်ကျောရိုး၏ဆုံးရှုံးမှုစုစုပေါင်းငွေပမာဏအဖြစ်သတ်မှတ်) လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မှုနှုန်းလျော့ကျလာကြွက်စည် cortex ပြပွဲအတွက်အလွှာ2/3ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ apical dendrites အပေါ်ကျောရိုး7နှင့် 24 (P7-24; Lendvai et al ။ , 2000; Cruz-မာတင် et al ။ , 2010) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုစဉ်ဆက်မပြတ် (အချိန်ဤကာလကိုကျော်တိုးပွါးCruz-မာတင် et al ။ , 2010) ။ ပိုက်ကွန်ကိုကျောရိုးအမြတ်၏ဤကနဦးအဆင့်တွင်ပြီးနောက်ကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေး (ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ခုခြုံငုံလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း outpace မှစတင်သည်Holtmaat et al ။ , 2005; Zuo et al ။ , 2005b; ယန် et al ။ , 2009) ။ အသစ်ကကျောရိုးကိုသာ 28% အချိန်၏တူညီသောကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်စဉ် P42 နှင့် P17 အကြား, ကျောရိုး၏ 5%, မောက်စည် cortex အတွက်အလွှာ5ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ apical dendrites တလျှောက်တွင်ဖယ်ရှားပစ်နေကြသည် (Zuo et al ။ , 2005a, b) ။ အရေးကြီးတာကမဟုတ်ဘဲအားလုံးကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေးမှအညီအမျှဖြစ်ပေါ်နိုင်နေသောခေါင်းစဉ်: ကြီးမားသောအကြီးအကဲများနှင့်အတူသူတို့အားပါးလွှာသောသူတို့ကိုထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျောရိုးဦးခေါင်းအရွယ်အစား Synaptic ခွန်အားနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်အဖြစ်, ဒီဖြစ်စဉ် (အားကောင်း synapses ပိုမိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုHoltmaat et al ။ , 2005) ။ ထို့အပြင်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကျောရိုး Pre-ရှိပြီးသားကျောရိုး (ထက်ဖျက်သိမ်းခံရဖို့ကပိုများပါတယ်Xu et al ။ , 2009), နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မီဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်ကျောရိုး၏အများစုအရွယ်ရောက်အာရုံခံဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်ထည့်သွင်းအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်း (Zuo et al ။ , 2005a; ယန် et al ။ , 2009; ယု et al ။ , 2013) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးလက်လှမ်းမမီ equilibrium ပြခြင်း, ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ (အိုမင်းစတင်ခြင်းသည်အထိအကြမ်းဖျင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲZuo et al ။ , 2005a; Mostany et al ။ , 2013).
တိရစ္ဆာန်ရဲ့အသက်တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာပြန်မွမ်းမံကျောရိုး။ အစောပိုင်း postnatal အတွက်လျင်မြန်စွာ spinogenesis မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်တဖြည်းဖြည်းကျောရိုးတံစဉ်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ လူကြီးများတွင်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးကျောရိုး၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူ, equilibrium ရောက်ရှိ ...
အဆိုပါနှောက် cortex အတွေ့အကြုံများမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်၎င်း၏ circuitry ပွနျလညျဖှဲ့စညျးဖို့အံ့သြဖွယ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ဘယ်လိုအာရုံခံအတွေ့အကြုံများ (သို့မဟုတ် သိ. ကင်းမဲ့) သက်ရောက်မှုကျောရိုးဒိုင်းနမစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်နှစ်ဦးစလုံးအာရုံခံထိန်းသိမ်းရေးအလှနျကျောရိုးဒိုင်းနမစ် impact ပြခဲ့ကြပေမယ့်အတိအကျအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုင်တွယ်ပါရာဒိုင်းနှင့်ကြာချိန်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အစောပိုင်း postnatal ကာလအတွင်းအာရုံခံသွင်းအားစုကျောရိုး၏တည်ငြိမ်နှင့်ရငျ့အတွက်မှတ်သားစရာများအခန်းကဏ္ဍကစား။ မောက်အမြင်အာရုံ cortex ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားထံမှအမြင်အာရုံ input ကိုမှု (ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏ကျောရိုး Motilal နှင့်ရငျ့အတွက်ကျဆင်းခြင်းတားဆီးMajewska နှင့် Sur, 2003; Tropea et al ။ , 2010) ။ အဆိုပါ PirB အဲဒီ receptor ၏မျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက် (ကျောရိုး Motilal အပေါ် monocular ဆင်းရဲချို့တဲ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှု mimickedDjurisic et al ။ , 2013) ။ ယခင်ကအမြင်အာရုံဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြွက်များတွင် Light-သွေးဆောင်ကျောရိုးရငျ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း excitatory synapses (များ၏ရငျ့အတွက် inhibitory ဆားကစ်၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြုသည် GABAergic စနစ်၏ pharmacological activation အားဖြင့် mimicked နိုင်Tropea et al ။ , 2010) ။ နောက်ပိုင်းပေါ်အာရုံခံအတှေ့အကွုံ (ကျောရိုး၏အသားတင်အရှုံးအဖြစ်သတ်မှတ်) ကျောရိုးတံစဉ်များကိုမောင်းနှင်။ 1 သို့မဟုတ်4နေ့ရက်ကာလအဘို့ 14 လအရွယ်ကြွက်များတွင်အားလုံးပါးသိုင်းမွေး၏တစ်ဖက်သတ်ချုံ့အဆိုပါစည် cortex အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေး, ဒါပေမယ့်ဘယ်ဖက်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးအကြီးအကျယ် unperturbed (Zuo et al ။ , 2005b; ယု et al ။ , 2013) ။ NMDA receptors ၏ Pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ဥပမာလှုပ်ရှားမှု-မှီခိုကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေးအတွက် NMDA အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုညွှန်း, ပါးမုနျးမှေးချုံ့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု mimickedZuo et al ။ , 2005b).
ပြီးပြည့်စုံသောပါးမုနျးမှေးချုံ့တကမ္ဘာလုံးအာရုံခံ input ကိုဖယ်ရှားပေးနေစဉ်, သည်အခြားပါးမုနျးမှေး ( "chessboard ချုံ့ခြင်း") ချုံ့ခြင်းယူဆရအားဖြင့်တစ်ဝတ္ထုအာရုံခံအတွေ့အကြုံကိုမိတ်ဆက်အိမ်နီးချင်းစည်၏လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ပုံစံများအတွက်မဆိုခြားနားချက်ချဲ့ထွင်။ ထိုသို့သောပါရာဒိုင်း (ကျောရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် cortical အာရုံခံတစ် subclass အတွက်ရွေးချယ်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကျောရိုးတည်ငြိမ်မှပြသထားသည်Trachtenberg et al ။ , 2002; Holtmaat et al ။ , 2006) ။ နယူးကျောရိုးဦးစားမဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ Tufts နှင့်အတူတွေထက်ရှုပ်ထွေးသော apical Tufts, (နဲ့အတူအလွှာ5ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံပေါ်သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်Holtmaat et al ။ , 2006) ။ αCaMKII-T286A ချွတ်ယွင်းကြွက်များတွင် chessboard ချုံ့ခြင်းမသနားနှင့်ချို့တဲ့စည်အကြားနယ်စပ်မှာအသစ်သော persistent ကျောရိုး၏တည်ငြိမ်တိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက် (Wilbrecht et al ။ , 2010) ။ မကြာသေးမီကတစ်ကြော့လေ့လာမှု optogenetic ဆွပေါင်းစပ်ပြီးနှင့် Vivo အတွက် ပုံရိပ်ကအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများ၏ပုံစံထက် dendritic ကျောရိုး၏တည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်သောပြင်းအား, (ကြောင်းကိုပြသWyatt et al ။ , 2012).
ချုံ့ခြင်း chessboard ဆင်တူ, အကျဉ်း monocular ဆင်းရဲချို့တဲ့ (MD) နှစ်ခုမျက်စိကနေသွင်းအားစုများအကြားကွာဟမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ချုံ့ခြင်း chessboard မှထို့ကြောင့်ဆင်တူ, MD mouse ကိုအမြင်အာရုံ cortex ၏မှန်ဘီလူးဇုန်အတွက်အလွှာ5ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ apical dendritic Tufts တလျှောက်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု (အလွှာ2/3အာရုံခံအတွက်ဒါမှမဟုတ် monocular ဇုန်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရHofer et al ။ , 2009), နောက်တဖန်တစ်ကလာပ်စည်းအမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ် synapses ပြုပြင်ညွှန်ပြ။ စိတ်ဝင်စားစရာဒုတိယ MD နောက်ထပ်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးတိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက်ပေမယ့်ရွေးချယ်ကနဦး MD ကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအသစ်သောကျောရိုးဒုတိယ MD (ကာလအတွင်းပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ synapses ခဲ့ကြောင်းအကြံပြုသည်ကနဦးက MD ကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသောကျောရိုးကျယ်ဝန်းHofer et al ။ , 2009).
ယူအတွင်းမှာ Dynamic ကျောရိုး
dendritic ကျောရိုး၏မြင့်မားတဲ့ dynamic သဘောသဘာဝကျောရိုးသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလွှာအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါ၎င်းပျံ့နှံ့နေတဲ့စိတ်ကူး elicits ။ (ပုံမှန်အားဖြင့်ကြီးမားအကြီးအကဲများနှင့်အတူ) တည်ငြိမ်ကျောရိုးမှတ်ဥာဏ်သိုလှောင်မှုက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာဒါဟာ (, (ပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ဦးခေါင်းနှင့်အတူ) အသစ်ပေါ်ထွက်လာကျောရိုးမှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူအခြေခံကြောင်းအကြံပြုထားသည်Bourne နှင့် Harris က, 2007) ။ တကယ်ပါပဲ, Vivo အတွက် ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှောက် cortex အတွက်ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်ကိုတိုက်ရိုက်သင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်အသစ်တခုတာဝန်သိတော့အဖြစ် mouse ကိုမော်တာ cortex မှာတော့ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးချက်ချင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒီလျင်မြန် spinogenesis ပြီးနောက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ (သို့ခြီးမွှောကျကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေးမှတဆင့်အခြေခံအဆင့်ကိုရောကျသှားသXu et al ။ , 2009; ယုနှင့် Zuo, 2011) ။ သီချင်းငှက်, ပိုမိုမြင့်မားအခြေခံကျောရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မှုနှုန်းမှာတော့သီချင်းသင်ယူမှုနောက်ဆက်တွဲသီချင်းအတုအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သောသူစွမ်းရည်နှင့်အတူပတျသကျတွေ့ရှိထားပြီးမတိုင်မီ (ရောဘတ် et al ။ , 2010) ။ ကြွက်များတွင်ကနဦးသင်ယူမှုကာလအတွင်းရရှိခဲ့ကျောရိုး၏ပမာဏနီးကပ်စွာ (သင်ယူမှုဝယ်ယူများ၏မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်Xu et al ။ , 2009); အသစ်ကျောရိုး၏ရှင်သန်မှုကို (မော်တာကျွမ်းကျင်မှု၏ retention ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ယန် et al ။ , 2009) ။ Pre-လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်တွေအတွက်ဝတ္ထုမော်တာတာဝန်သင်ယူခြင်း (အရွယ်ရောက်သူမော်တာ cortex အတွက်အားကောင်းတဲ့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်သွေးဆောင်ဆက်လက်အဖြစ်ထို့အပြင်မတူညီတဲ့မော်တာကျွမ်းကျင်မှုဖွယ်ရှိသည်မော်တာ cortex အတွက် synapses ၏ကွဲပြားခြားနားသော subpopulations အားဖြင့် encoded နေကြတယ်Xu et al ။ , 2009) ။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ကိုလည်း glucocorticoid အဆင့်အထိသက်ရောက်မှုမော်တာသင်ယူမှု-သွေးဆောင်ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ လေ့ကျင့်ရေးကအောက်ပါ glucocorticoid ကျင်းသင်တန်းနှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် retention ကို (အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကျောရိုး၏တည်ငြိမ်များအတွက်လိုအပ်သောခဲ့သော်လည်း glucocorticoid ထိပ်မှာလေ့ကျင့်ရေးကြွက်, ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးမြင့်မားမှုနှုန်းမှုListon et al ။ , 2013) ။ ရောဂါဗေဒသင်ယူမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်သောစွဲ, (Hyman, 2005မော်တာသင်ယူမှုပြုသကဲ့သို့), ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်အလားတူယာယီအပြောင်းအလဲများကို elicits ။ တစ်ဦးကိုကင်း-conditioning ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်း, (မကြာသေးခင်ကပုံရိပ်လေ့လာမှုကနဦးကင်းထိတွေ့ခြင်းဟာတိုကျရိုကျ cortex အတွက်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးရာထူးတိုးကြောင်းပြပြီး, အသစ်သော persistent ကျောရိုး၏ပမာဏကိုကင်း-တွဲအခြေအနေတွင်များအတွက် preference ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းMunoz-Cuevas et al ။ , 2013) ။ ပိုများသောစိတ်ဝင်စားစရာကွဲပြားခြားနားသော cortical ဒေသများတွင်ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်တူညီသောတာဝန်စဉ်အတွင်းကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ခြေမလှုပ်ခြင်းနှင့်အတူအားလုံးအာရုံတွေကိုအာရုံနှင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်, တစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့အေးစက်ပါရာဒိုင်း။ ယင်းအာရုံ cortex မှာ, unpaired အေးစက်ကျောရိုး၏တိုးချဲ့ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေစဉ်တိုးမြှင့်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (တွဲကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်Moczulska et al ။ , 2013) ။ ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းနဲ့ဆက်စပ်နှင့် reconditioning (မျိုးသုဉ်းအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကျောရိုးဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်နေစဉ်တိုကျရိုကျအသင်းအဖွဲ့ cortex ခုနှစ်တွင်တိုးမြှင့်ကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေး, သင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်လိုင် et al ။ , 2012) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများသင်ယူမှု-သွေးဆောင်ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်အခြေခံယာယီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုဖျောပွ။ ကျောရိုးသင်ယူမှုအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းရှိမရှိသည့်အမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံခံတိုက်နယ်နဲ့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ဆဲလ်အမျိုးအစားများပေါ်မူတည်ပါသည်။
ဒါဟာအထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြအပေါငျးတို့သဥပမာသတိတိကျတဲ့အချိန်စာမျက်နှာ, တည်နေရာ, နှင့် Episode အတွေ့အကြုံကို (ဆိုလိုသည်မှာ declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်) ပါဝင်ပါဘူးပေးသော Non-declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်, ရည်ညွှန်းကြောင်းသတိပြုသင့်ပေသည်။ ၏တူးဖော်ရေး Vivo အတွက် declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သထေူ၏။ တဦးတည်းလက်, hippocampus တွင်, declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အလွန်အရေးပါဖွဲ့စည်းပုံ, cortex အောက်နှင့်စံ Two-ဖိုတွန် microscopy များ၏လက်လှမ်းမမီကျော်လွန်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်ပျံ့ပစ်မှတ်ထားပုံရိပ်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲစေကြီးများ neocortical ကွန်ရက်များထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခံရဖို့ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် cortex အတွက်အတူတကွမှတ်ဉာဏ်ခွဲဝေ၏ပိုကောင်းတဲ့ဥာဏ်နှင့်တကွနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာတွေကို (ဥပမာ microendoscopy, သပ္ပါယ် optics) ၏တိုး declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်အခြေခံကျောရိုးဒိုင်းနမစ်၏အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတံခါးသော့ကိုကိုင်။
dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ ALTER အမျိုးမျိုးသောအာရုံကြောနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရောဂါထပ်မံကျောရိုးသင့်လျော်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးကျောထောက်နောက်ခံပြုသောစိတ်ကူး corroborates ထားတဲ့ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမာခံများမူမမှန်အတူတွေ့ရမယ်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုဘို့ကျောရိုးမူမမှန် (သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အမူအကျင့်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ကျဆင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်ကြောင်းကြီးထွားလာသဘောတူညီမှုရှိပါတယ် Fiala et al ။ , 2002; Penzes et al ။ , 2011).
လေဖြတ်မော်ဒယ်များမှာ, ပြင်းထန် ischemia ကယ်ဆယ်ရေးအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလ (20-60 မိအတွင်းတွင်ဖျော်ဖြေလျှင် reperfusion ပြီးနောက် Reversible လုပ်ဖြစ်သည့်လျင်မြန်စွာကျောရိုးအရှုံးမှဦးဆောင်ကြောင်းပြသသည်, Zhang က et al ။ , 2005) ။ အောက်ပါလေဖြတ်ခြင်း, ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အနီးအနား infarct ဒေသအတွင်းနောက်ဆက်တွဲဖျက်သိမ်းရေးတိုး, ဒါပေမယ့် cortical နယ်မြေများအတွက် infarct ကနေဝေးလံတဲ့ဒါမှမဟုတ် contralateral hemisphere ထဲမှာမ (ဘရောင်း et al ။ , 2009; Johnston et al ။ , 2013) ။ ဤသည်ဒဏ်ရာ-သွေးဆောင် plasticity 1 ရက်သတ္တပတ် Post-လေဖြတ်မှာယင်း၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိ; ထို့နောက်အနေဖြင့်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးနှုန်းအပေါ်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်း။ ဤဖြစ်စဉ်ကို (ကျန်ရစ်သူအနီးအနား infarct cortical တစ်ရှူးကုထုံးကြားဝင်ဆုံးအာမင်နေသောကာလအတွင်းအရေးကြီးသောကာလ၏တည်ရှိမှုအကြံပြုဘရောင်း et al ။ , 2007, 2009) ။ နာတာရှည်နာကျင်မှုများအတွက် mouse ကိုမော်ဒယ်မှာတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း sciatic အာရုံကြော ligation ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါလေဖြတ်မော်ဒယ်ဆင်တူ, ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှုန်းမြင့်က၎င်း၏လျှော့ချခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်ကနဦးတိုးမှဦးဆောင်ဖျက်သိမ်းရေး၏ precedes ။ ထိုသို့သောဆိုးကျိုးများ (Post-ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကျောရိုးပြုပြင်လှုပ်ရှားမှု-မှီခိုကြောင်းကိုညွှန်ပြ, tetrodotoxin ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနိုင်ကင်မ်နှင့် Nabekura, 2011).
ပြောင်းလဲကျောရိုးဒိုင်းနမစ်လည်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရောဂါများတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျောရိုးအရှုံးကို (ဦးနှောက် cortex အတွက်β-amyloid plaque ၏အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်အရှိန်ဖြစ်ပါတယ်Tsai et al ။ , 2004; Spiers et al ။ , 2005) ။ Huntington ရဲ့ရောဂါကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှုန်းကိုတိုး၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်ခုနှစ်တွင်, ဒါပေမယ့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကျောရိုးကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ဦးအသားတင်ကျဆင်းခြင်းအတွက်ရလဒ်များအရာဒေသခံ circuitry, (သို့ထည့်သွင်းခံရဖို့ဆက်လက်ရှိဘူးMurmu et al ။ , 2013) ။ neurodegenerative ရောဂါများများသောအားဖြင့်အသားတင်ကျောရိုးအရှုံးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နေစဉ်, neurodevelopmental မမှန်ကွဲပြားခြားနားကျောရိုး phenotypes ပြ။ မခိုင်မြဲပုံကို X syndrome ရောဂါတစ် mouse ကိုမော်ဒယ်မှာတော့ကျောရိုးကိုပိုမိုများပြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ fixed တစ်ရှူး (များ၏စာမေးပွဲအပေါ်သို့နုပေါ်လာComery et al ။ , 1997; Irwin et al ။ , 2000). Vivo အတွက် လေ့လာမှုများထပ်မံ (ထိုကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များကျောရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတွက်အမျိုးမျိုးသော cortical ဒေသများရှိတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသCruz-မာတင် et al ။ , 2010; ပန် et al ။ , 2010; Padmashri et al ။ , 2013) နှင့်မပါးမုနျးမှေးချုံ့ခြင်းမဟုတ်သလိုမော်တာသင်ယူမှုနောက်ထပ် (ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပန် et al ။ , 2010; Padmashri et al ။ , 2013) ။ MECP2 တစ် Rett Syndrome related ဗီဇ overexpressing ကြွက်တွေမှာ, နှစ်ဦးစလုံးကျောရိုးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုတိုးမြှင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သစ်ကိုကျောရိုး (ကျောရိုးတစ်ဦးအသားတင်အရှုံးအတွက်ရရှိလာတဲ့, ရိုင်းအမျိုးအစားကြွက်တွေမှာထက်ဖျက်သိမ်းရေးဖို့ပိုအားနည်းချက်ရှိပါတယ်Jiang et al ။ , 2013).
ကျောရိုး Dynamic TO သို့ GLIAL ပံ့ပိုးမှုများကို
အာရုံခံခြင်းနှင့် glia: အဆိုပါဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ဆဲလ်နှစ်မျိုးနှစ်အတန်းပါဝင်သည်။ glial ဆဲလ်များ၏အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အခန်းကဏ္ဍ Synaptic လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဒိုင်းနမစ်မှာသူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လေ့လာမှုများကျောရိုးရငျ့နှင့် plasticity အတွက် glial အချက်ပြ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစူးစမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, astrocytic အချိုမှုလွန်ကဲ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံကို-မှီခိုကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြသခဲ့ပြီးယု et al ။ , 2013) ။ glial ဆဲလ်၏နောက်ထပ်အမျိုးအစား, microglia လည်း dendritic ကျောရိုးနှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့အတွက်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ microglial လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကျောရိုးအဆက်အသွယ်၏ Motilal (တက်ကြွစွာအာရုံခံအတှေ့အကွုံအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်နှင့်ကျောရိုးဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Tremblay et al ။ , 2010) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, microglia ၏ကွယ်ပျောက်သွားသွေးဆောင်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးသင်ယူခြင်းမော်တာ၏သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးအတွက်ရလဒ်နှင့် microglia အတွက်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) ၏ရွေးချယ်ဖယ်ရှားရေး (microglial ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှု recapitulatedParkhurst et al ။ , 2013).
ကျောရိုး Dynamics ၏ Spatial manifest
ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်ကျောရိုးပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ပျောက်ဆုံး dendrites တစ်လျှောက်တွင်မယူနီဖောင်းမဟုတ်သလိုကျပန်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ Spatial ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုထားပါတယ် "ပူအစက်အပြောက်။ " ဟုအဆိုပါ mouse ကိုမော်တာ cortex များတွင်တူညီသောမော်တာတာဝန်နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းကြောင်းသစ်ကိုကျောရိုး စပျစ်သီးပြွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ပြင်သီးပြွတ်၌ဒုတိယသစ်ကိုကျောရိုး၏ထို့အပြင်မကြာခဏပထမဦးဆုံးအသစ်သောကျောရိုး၏ပျတိုးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, ကွဲပြားခြားနားသောမော်တာအလုပ်များကိုတွဲဖက်ကွပ်မျက်စဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်မော်တာသန့်စင်နေစဉ်အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကျောရိုး (Cluster ပါဘူးဖူ et al ။ , 2012) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုပထမဦးဆုံးအသစ်သောကျောရိုး၏ထပ်ခါတလဲလဲပြန်လည် activation ဒုတိယသစ်ကိုကျောရိုး၏ Cluster ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်၏ဆင်တူ Spatial selection ကိုကွောကျရှံ့အေးစက်ပါရာဒိုင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်: ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းဖျက်သိမ်းတဲ့ကျောရိုးများသောအားဖြင့်က၎င်း၏အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျောရိုးဖြင့်အစားထိုးနေသည် (2 μmအတွင်း) ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်း (လိုင် et al ။ , 2012) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကျောရိုးဒိုင်းနမစ်လည်း inhibitory synapses ၏ဒိုင်းနမစ်ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ Monocular ဆင်းရဲချို့တဲ့သိသိသာသာ (အလွှာ2/3ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက်အနီးအနားမှာကျောရိုး၏ညှိနှိုင်းဒိုင်းနမစ်နှင့် inhibitory synapses တိုးပွါးချန် et al ။ , 2012) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Cluster synapses အဆိုပါ dendritic Arbore တစ်လျှောက်လုံး synapses လူစုခွဲထက်တူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကုဒ်သွင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်း postulates သော Cluster plasticity မော်ဒယ်, (ကိုထောကျပံ့Govindarajan et al ။ , 2006).
ကိုပေါင်းစပ်ပြီး Vivo အတွက် မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ် patch ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်းကျောရိုးကယ်လစီယမ်ပုံရိပ်တစ်ခုမကြာသေးမီအလုပ် (ကွဲပြားခြားနားသောအထွတ်အထိပ်လှိုင်းအဘို့အညှိကျောရိုး mouse ကိုအာရုံ cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ dendrites တလျှောက်တွင်ဤလက်ဆွဲဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးချန် et al ။ , 2011) ။ Cluster အသစ်သောကျောရိုးနှင့်ဆင်တူသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ inputs ကိုက်ညီတဲ့ပါဘူး (ဥပမာလှုပ်ရှားမှုပုံစံများ, tuning ဂုဏ်သတ္တိများ): ဒီတွေ့ရှိချက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့မေးစရာ? ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်, ထို dendritic Arbore ၏ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာကျော်ကျောရိုးကိုအမြည်းကျောရိုးပြုပြင်၏ "ဟော့စပေါ့" ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် Real-time အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်နှင့်အတူကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သောစမ်းသပ်ချက်လှုပ်ရှားမှု-မှီခိုကျောရိုးပြုပြင်၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ elucidate ကူညီဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအာရုံခံအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်သိုလှောင်ဖို့သဲလွန်စပေးသွားမှာပါသာ။
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့အသက်ရှင်သောဦးနှောက်ထဲမှာ dendritic ကျောရိုး၏ဒိုင်းနမစ်အပေါ်မကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေသိသိသာသာယာယီနှင့် Spatial ပြောင်းလဲများစွာသောမေးခွန်းများကိုအမျိုးမျိုးသောမျက်နှာစာပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိပုံကိုကျောရိုးဒိုင်းနမစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုချီတက်ခဲ့ကြပေမယ့်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖျက်သိမ်းခံရဖို့အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကျောရိုးနှင့်ကျောရိုးထဲကနေတည်ငြိမ်ကျောရိုးခွဲခြားကြောင်းမော်လီကျူးအမှတ်အသားများရှိသနညျး အဆိုပါ dendrite Synaptic ဂီယာ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ဝယ်လိုအားရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းငှါဒါကျောရိုး၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကတစ် homeostatic ယန္တရားမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားသလဲ? (တူကွန်ယက်ကို topology ထိန်းသိမ်းနေစဉ်) အသစ်များကိုကျောရိုး၏ Cluster အတူတူ axon နှင့်အတူလက်ရှိဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အားပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်မ, သို့မဟုတ်ပါကအနီးအနားရှိယခင်က unconnected axon နှင့်အတူအပိုဆောင်းဆက်သွယ်မှုများတည်ထောင်ခြင်းညွှန်ပြသနည်း? ဒါဟာအထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြအားလုံးအကျင့်ကိုကျင့်ဇာတ်လမ်း၏ထက်ဝက်သာသော postsynaptic ခြမ်း, အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ကျောရိုးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဒိုင်းနမစ်၏အခြားအဓိကပစ်မှတ်ကတော့ presynaptic ခြမ်းမှာတည်ရှိသည်: အဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဂျီသြမေတြီ presynaptic axon နှင့် axon boutons ၏ရရှိမှု။ ထိုကဲ့သို့သော presynaptic သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိကျောရိုးဒိုင်းနမစ်၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှပေါ်ပေါက်မေးခွန်းများကိုအများအပြားဖြေရှင်းအတွက်အရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ presynaptic axon သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ကနေအစပြုစေခြင်းငှါ, များသောအားဖြင့်များစွာသောအခြား axon ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ intermingled ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်သို့သော်တစ်ဦး image dendritic ကျောရိုး၏ presynaptic partner ၏မှတ်ပုံတင်တစ်ခုနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အများကြီးအကြွင်းအကျန်အ axon bouton နှင့်ကျောရိုးအကြားအဆက်အသွယ် site ကိုမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအခြေခံအဆောက်အဦးအသစ်ပြန်ပြုပြင်၏ sequence ကိုများနှင့်မည်သို့မည်ပုံထိုကဲ့သို့သော sequence ကိုအပေါင်းအသင်း synapses ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အတူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရမည်။ အမူအကျင့်ခြယ်လှယ်များ၏အခြေအနေတွင် axon boutons နှင့်၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်း. ကျောရိုး၏တစ်ပြိုင်နက်ပုံရိပ်ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်အပေါများသတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအီလက်ထရွန် microscopy အဖြစ်နောက်ကြောင်းပြန် ultrastructural စာမေးပွဲ (Knott et al ။ , 2009) နှင့် Array Tomography (Micheva နှင့်စမစ်, 2007; Micheva et al ။ , 2010) လည်းဖြည့်စွတ်ခြင်းငှါ Vivo အတွက် ပုံရိပ် synapses ၏ရှေ့မှောက်တွင်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့, Images အဆောက်အဦများ၏မော်လီကျူးလက်ဗွေထုတ်ဖေါ်ရန်။
အဆိုပါယာယီ sequence ကိုနှင့် Spatial အာရုံခံဆက်သွယ်မှု၏ရွေးချယ်ပြန်စီစဉ်များနှင့်မည်သို့မည်ပုံဤပြောင်းလဲစုပေါင်းအတွေ့အကြုံများ၏ရလဒ်အဖြစ်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲအထောက်အကူပြု, neuroscience အတွက်အခြေခံအကျဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုံရိပ်နည်းစနစ်များတွင်တိုးအတူတကွ electrophysiology, မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇနှင့် optogenetics ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တကွ, ဏုအဆင့်မှာအာရုံခံ circuitry ၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်အဖြစ်သတင်းအချက်အလက် encoding က၏ယန္တရားများ, ဦးနှောက်ထဲမှာပေါင်းစည်းမှုနှင့်သိုလှောင်မှုထုတ်ဖေါ်ကူညီပေးပါမည်။
Chia-Chien Chen ကအဆိုပါကိန်းဂဏန်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ Chia-Chien Chen က Ju လူးနှင့်ရီ Zuo လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးသားခဲ့သည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုရီ Zuo မှစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေ (R01MH094449) ကထောက်ခံသည်။
Ballesteros-Yanez ဗြဲ, Benavides-Piccione R. , Elston Gn, Yuste R. , Defelipe ဂျေ (2006) ။ mouse ကို neocortex အတွက် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်။ neuroscience 138 403-409 10.1016 / j.neuroscience.2005.11.038 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bourne ဂျေ, Harris က KM (2007) ။ ပါးလွှာသောကျောရိုးသတိရကြောင်းမှိုကျောရိုးဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူသလား? Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 17 381-386 10.1016 / j.conb.2007.04.009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘရောင်းအီး, Aminoltejari K. , Erb အိပ်ချ်, Winship မှာ IR, Murphy က TH (2009) ။ Vivo အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ဗို့အား-အထိခိုက်မခံဆိုးဆေးပုံရိပ် somatosensory မြေပုံလေဖြတ်ဖို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသသည့်အနီးအနား infarct ဇုန်များနှင့်ဝေးလံသောဆိုဒ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွင်း activation ၏ကြာရှည်သည် Modes နှင့်အတူသစ်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဆားကစ်များကရက်သတ္တပတ်ကျော်ကအစားထိုးနေကြပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 29 1719-1734 10.1523 / JNEUROSCI.4249-08.2009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘရောင်းအီးလီ P. , ဘှိုငျဒျ JD, အန်တိုနီ KR, Murphy က TH (2007) ။ လေဖြတ်ခြင်းမှပြန်လည် cortical တစ်ရှူးအတွက် dendritic ကျောရိုးနှင့်သွေးကြောအသစ်ပြန်ပြုပြင်၏ကျယ်ပြန့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်။ ဂျေ neuroscience ။ 27 4101-4109 10.1523 / JNEUROSCI.4295-06.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကြံအမ်, MacOS ခ, Knott G. အ, Holtmaat အေ (2014) ။ Vivo အတွက် PSD-95 Cluster နှင့်ကျောရိုးတည်ငြိမ်ရေးတို့အကြားဆက်ဆံရေး။ ဂျေ neuroscience ။ 34 2075-2086 10.1523 / JNEUROSCI.3353-13.2014 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen က JL, ဗီလာ KL, Cha JW, ဒီတော့ PT, Kubota Y. , Nedivi အီး (2012) ။ အရွယ်ရောက်သူ neocortex အတွက် inhibitory synapses နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ဒိုင်းနမစ်ပြွတ်။ အာရုံခံဆဲလျ 74 361-373 10.1016 / j.neuron.2012.02.030 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen က X တို့မှာ, Leischner U. , Rochefort NL, Nelken ဗြဲ, Konnerth အေ (2011) ။ Vivo အတွက် cortical အာရုံခံအတွက်တစ်ခုတည်းသောကျောရိုး၏ functional မြေပုံ။ သဘာဝ 475 501-505 10.1038 / nature10193 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chow DK, Groszer အမ်, Pribadi အမ်, Machniki အမ်, Carmichael ST, လျူ X တို့မှာ, et al ။ (2009) ။ Laminar နှင့်ရင့်ကျက် cortex အတွက် dendritic တိုးတက်မှု၏ compartmental စည်းမျဉ်း။ နတ်။ neuroscience ။ 12 116-118 10.1038 / nn.2255 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Comery က TA, Harris က JB, Willem PJ, Oostra BA, Irwin လုပ် SA, Weiler IJ ။ (1997) ။ ပျက်စီးလွယ် X ကိုနောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာပုံမှန်မဟုတ်သော dendritic ကျောရိုး: ရငျ့နှင့်တံစဉ်များကိုလိုငွေပြမှု။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 94 5401-5404 10.1073 / pnas.94.10.5401 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cruz-မာတင်အေ, Crespo အမ်, Portera-တစ်ချိန်တည်းမှာပင် C. (2010) ။ ပျက်စီးလွယ် X ကိုကြွက်များတွင် dendritic ကျောရိုး၏တည်ငြိမ်နှောင့်နှေး။ ဂျေ neuroscience ။ 30 7793-7803 10.1523 / JNEUROSCI.0577-10.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Djurisic အမ်, Vidal GS, မန်းအမ်, အာရုန်အေကင်မ်တီ, Ferrao ဆန်းတို့စအေ, et al ။ (2013) ။ PirB cortical plasticity များအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလွှာဟာထိန်းညှိ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 110 20771-20776 10.1073 / pnas.1321092110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fiala JC, Spacek ဂျေ, Harris က KM (2002) ။ Dendritic ကျောရိုးရောဂါဗေဒ: အာရုံကြောချို့ယွင်း၏အကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်? ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 39 29–54 10.1016/S0165-0173(02)00158-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖူအမ်, ယု X တို့မှာ, Lu ကဂျေ, Zuo Y. (2012) ။ ထပ်ခါထပ်ခါမော်တာသင်ယူမှု Vivo အတွက် Cluster dendritic ကျောရိုး၏ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ သဘာဝ 483 92-95 10.1038 / nature10844 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖူအမ်, Zuo Y. (2011) ။ အဆိုပါ cortex အတွေ့အကြုံ-မှီခိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 34 177-187 10.1016 / j.tins.2011.02.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Govindarajan အေ, Kelleher RJ, Tonegawa အက်စ် (2006) ။ ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် engrams ၏တစ်ဦးက Cluster plasticity မော်ဒယ်။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။7575-583 10.1038 / nrn1937 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grutzendler ဂျေ, Kasthuri N. , Gan သည့် WB (2002) ။ အရွယ်ရောက်သူ cortex အတွက်ရေရှည် dendritic ကျောရိုးတည်ငြိမ်ရေး။ သဘာဝ 420 812-816 10.1038 / nature01276 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် KJ, Dunaevsky အေ (2007) ။ Dendritic ကျောရိုး plasticity: ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျော်လွန်ရှာဖွေနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1184 65-71 10.1016 / j.brainres.2006.02.094 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Harris က KM, Kater SB (1994) ။ Dendritic ကျောရိုး: ဆယ်လူလာ Special Synaptic function ကိုမှတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှစ်ဦးစလုံးပေးခြင်း။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 17 341-371 10.1146 / annurev.ne.17.030194.002013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဤနေရာတွင်အိပ်ချ်, Sheng အမ် (2001) ။ Dendritic ကျောရိုး: ဖွဲ့စည်းပုံ, ဒိုင်းနမစ်နှင့်စည်းမျဉ်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။2880-888 10.1038 / 35104061 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hofer SB, Mrsic-Flogel TD, Bonhoeffer တီ, Hubener အမ် (2009) ။ အတှေ့အကွုံ cortical ဆားကစ်တစ်ခုရေရှည်တည်တံ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသဲလွန်စထွက်ခွာမည်။ သဘာဝ 457 313-317 10.1038 / nature07487 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holtmaat အေ, Svoboda K. (2009) ။ အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်အတွက်အတှေ့အကွုံ-မှီခိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Synaptic plasticity ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 10 647-658 10.1038 / nrn2699 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holtmaat AJ, Trachtenberg JT, Wilbrecht L. , သိုးထိန်း GM က, Zhang က X တို့မှာ, Knott GW, et al ။ (2005) ။ Vivo အတွက် neocortex အတွက်ယာယီနှင့်အမြဲတမ်း dendritic ကျောရိုး။ အာရုံခံဆဲလျ 45 279-291 10.1016 / j.neuron.2005.01.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holtmaat အေ, Wilbrecht L. , Knott GW, Welker အီး, Svoboda K. (2006) ။ အတှေ့အကွုံ-မှီခိုနှင့် neocortex အတွက်ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ကျောရိုးတိုးတက်မှုနှုန်း။ သဘာဝ 441 979-983 10.1038 / nature04783 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hyman SE (2005) ။ စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 162 1414-1422 10.1176 / appi.ajp.162.8.1414 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Irwin လုပ် SA, Galvez R. , Greenough WT (2000) ။ ပျက်စီးလွယ်-X ကိုဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု syndrome ရောဂါအတွက် Dendritic ကျောရိုးအခြေခံအဆောက်အဦးကွဲလွဲချက်များ။ Cereb ။ cortex 10 1038-1044 10.1093 / cercor / 10.10.1038 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jiang အမ်, Ash ကို RT ကို, Baker လုပ် SA, Suter ခ, ဖာဂူဆန်အေ, ပန်းခြံဂျေ, et al ။ (2013) ။ Dendritic Arbore နှင့်ကျောရိုးဒိုင်းနမစ် MECP2 ပုံတူ syndrome ရောဂါ၏ mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 33 19518-19533 10.1523 / JNEUROSCI.1745-13.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Johnston DG, Denizet အမ်, Mostany R. , Portera-တစ်ချိန်တည်းမှာပင် C. (2013) ။ Vivo ပုံရိပ်ထဲမှာနာတာရှည်လေဖြတ်ပြီးနောက် contralesional cortex အတွက် dendritic plasticity သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ remapping မရှိသက်သေအထောက်အထားပြသထားတယ်။ Cereb ။ cortex 23 751-762 10.1093 / cercor / bhs092 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kim က SK ကို, Nabekura ဂျေ (2011) ။ အရံအာရုံကြောဒဏ်ရာနှင့် neuropathic နာကျင်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အောက်ပါအရွယ်ရောက် somatosensory cortex အတွက်လျင်မြန်စွာ Synaptic ပြုပြင်။ ဂျေ neuroscience ။ 31 5477-5482 10.1523 / JNEUROSCI.0328-11.2011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knott GW, Holtmaat အေ, Trachtenberg JT, Svoboda K. , Welker အီး (2009) ။ ယခင်က Vivo နှင့်အလင်းနှင့်အီလက်ထရွန်ဏုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့အချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် imaged GFP-label တပ်ထားသောအာရုံခံပြင်ဆင်နေများအတွက်တစ်ဦးက protocol ကို။ Natl ။ Protoc ။41145-1156 10.1038 / nprot.2009.114 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knott GW, Holtmaat အေ, Wilbrecht L. , Welker အီး, Svoboda K. (2006) ။ ကျောရိုးတိုးတက်မှုနှုန်း Vivo အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neocortex အတွက် synapses ဖွဲ့စည်းရေး precedes ။ နတ်။ neuroscience ။91117-1124 10.1038 / nn1747 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လိုင် CS, Frank TF, Gan သည့် WB (2012) ။ dendritic ကျောရိုးပြုပြင်အပေါ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နှင့်မျိုးသုဉ်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ။ သဘာဝ 483 87-91 10.1038 / nature10792 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lendvai ခ, Stern ပာ EA ၏, ချန်ခ, Svoboda K. (2000) ။ Vivo အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြွက်စည် cortex အတွက် dendritic ကျောရိုး၏အတွေ့အကြုံကို-မှီခို plasticity ။ သဘာဝ 404 876-881 10.1038 / 35009107 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lippman ဂျေ, Dunaevsky အေ (2005) ။ ကျောရိုး morphogenesis နှင့် plasticity Dendritic ။ ဂျေ Neurobiol ။ 64 47-57 10.1002 / neu.20149 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Liston C. , Cichon JM, Jeanneteau အက်ဖ်, Jia Z. , Chao အမ် V ကို, Gan သည့် WB (2013) ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian glucocorticoid လှိုသင်ယူမှု-မှီခို synapses ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်။ နတ်။ neuroscience ။ 16 698-705 10.1038 / nn.3387 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lund JS, Booth RG, Lund RD (1977) ။ မျောက်များ၏အမြင်အာရုံ cortex (ဧရိယာ 17) (မှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီMacaca nemestrina): postnatal ရငျ့ကကျြမှသန္ဓေသားနေ့က 127 နေ Golgi လေ့လာမှု။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 176 149-188 10.1002 / cne.901760203 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Majewska အေ, Sur အမ် (2003) ။ အဆိုပါဝေဖန်ကာလအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အမြင်အာရုံဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ: Vivo အတွက်အမြင်အာရုံ cortex အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Motilal ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 100 16024-16029 10.1073 / pnas.2636949100 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Micheva KD, Busse ခ, Weiler NC, O'Rourke N. , Smith က SJ (2010) ။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား synapses လူဦးရေရဲ့ single-synapses ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: proteomic ပုံရိပ်နည်းလမ်းများနှင့်အမှတ်အသားများ။ အာရုံခံဆဲလျ 68 639-653 10.1016 / j.neuron.2010.09.024 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Micheva KD, Smith က SJ (2007) ။ array tomography: အာရုံကြောဆားကစ်၏မော်လီကျူးဗိသုကာနှင့် ultrastructure imaging အသစ်တစ်ခုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 55 25-36 10.1016 / j.neuron.2007.06.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mizrahi အေ, Katz LC (2003) ။ အရွယ်ရောက်သူ olfactory မီးသီးအတွက် Dendritic တည်ငြိမ်ရေး။ နတ်။ neuroscience ။61201-1207 10.1038 / nn1133 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Moczulska Ke, Tinter-Thiede ဂျေ, ပတေရုအမ်, Ushakova L. , Wernle တီ, Bathellier ခ။ (2013) ။ မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနေစဉ်အတွင်း mouse ကိုအာရုံ cortex အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Dynamics ကို။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 110 18315-18320 10.1073 / pnas.1312508110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mostany R. , Anstey je, Crump KL, MacOS ခ, Knott G. အ, Portera-တစ်ချိန်တည်းမှာပင် C. (2013) ။ ပုံမှန်ဦးနှောက်အိုမင်းစဉ်အတွင်း Synaptic ဒိုင်းနမစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 33 4094-4104 10.1523 / JNEUROSCI.4825-12.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mostany R. , Portera-တစ်ချိန်တည်းမှာပင် C. (2011) ။ အနီးအနား infarct cortex အတွက်အလွှာ5ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏အကြီးစား dendritic plasticity ၏မရှိခြင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 31 1734-1738 10.1523 / JNEUROSCI.4386-10.2011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Munoz-Cuevas FJ, Athilingam ဂျေ, Piscopo ဃ, Wilbrecht L. (2013) ။ တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 16 1367-1369 10.1038 / nn.3498 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Murmu RP လီဒဗလျူ, Holtmaat အေလီ JY (2013) ။ Dendritic ကျောရိုးမတည်ငြိမ်မှု Huntington ရဲ့ရောဂါဟာကြွက်မော်ဒယ်အတွက်တိုးတက်သော neocortical ကျောရိုးအရှုံးစေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 33 12997-13009 10.1523 / JNEUROSCI.5284-12.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nevian တီ, Larkum ME, Polsky အေ, ခီလာဂျေ (2007) ။ အလွှာ5ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ Basal dendrites ၏ Properties ကို: တစ်တိုက်ရိုက် patch ကို-ညှပ်မှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှု။ နတ်။ neuroscience ။ 10 206-214 10.1038 / nn1826 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nimchinsky EA ၏, Sabatini BL, Svoboda K. (2002) ။ dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို။ Annu ။ ဗျာ Physiol ။ 64 313-353 10.1146 / annurev.physiol.64.081501.160008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Padmashri R. , Reiner ဘီစီ, Suresh အေ, Spartz အီး, Dunaevsky အေ (2013) ။ ပျက်စီးလွယ် x ကို syndrome ရောဂါတစ် mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်သင်ယူမှုမော်တာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ် Synaptic plasticity ။ ဂျေ neuroscience ။ 33 19715-19723 10.1523 / JNEUROSCI.2514-13.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပန်အက်ဖ်, Aldridge GM က, Greenough WT, Gan သည့် WB (2010) ။ ပျက်စီးလွယ် X ကို syndrome ရောဂါတစ် mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်အာရုံခံအတှေ့အကွုံအားဖြင့်မော်ဂျူမှ Dendritic ကျောရိုးမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အာရုံမခံစားနိုင်သော။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 107 17768-17773 10.1073 / pnas.1012496107 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Parkhurst CN ယန်ဂျီ, Ninan ဗြဲ, Savas ဖြစ်မှု, Yates JR, III ကို, Lafaille JJ, et al ။ (2013) ။ Microglia ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်မှတဆင့်သင်ယူမှု-မှီခို synapses ဖွဲ့စည်းရေးမြှင့်တင်ရန်။ ကလာပ်စည်း 155 1596-1609 10.1016 / j.cell.2013.11.030 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Penzes P. , Cahill ME, ဂျုံးစ် Ka, Vanleeuwen je, Woolfrey KM (2011) ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် Dendritic ကျောရိုးရောဂါဗေဒ။ နတ်။ neuroscience ။ 14 285-293 10.1038 / nn.2741 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ramon y က Cajal အက်စ် (1888) ။ Estructura က de los centros nerviosos de las ဗျာ aves ချုံ့။ Histol ။ စံ။ Pat ။ 1 1-10
ရောဘတ် TF, Tschida Ka, Klein ME, Mooney R. (2010) ။ အမူအကျင့်သင်ယူမှုစတင်ခြင်းမှာလျင်မြန်စွာကျောရိုးတည်ငြိမ်နှင့် Synaptic တိုးမြှင့်။ သဘာဝ 463 948-952 10.1038 / nature08759 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schubert V. , Lebrecht ဃ, Holtmaat အေ (2013) ။ Peripheral deafferentation-မောင်းနှင်အလုပ်လုပ်တဲ့ somatosensory မြေပုံကိုဆိုင်းဒေသခံမဟုတ်ဘဲအကြီးစား dendritic ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 33 9474-9487 10.1523 / JNEUROSCI.1032-13.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Segal အမ် (2005) ။ Dendritic ကျောရိုးနှင့်ရေရှည် plasticity ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။6277-284 10.1038 / nrn1649 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spiers TL, et al Meyer-Luehmann အမ်, Stern ပာ EA ၏, Mclean PJ, Skoch ဂျေ, ငုယင် PT ။ (2005) ။ မျိုးဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် intravital multiphoton microscopy ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြ amyloid ရှေ့ပြေးပရိုတိန်း Transgene ကြွက်တွေမှာ Dendritic ကျောရိုးမူမမှန်။ ဂျေ neuroscience ။ 25 7278-7287 10.1523 / JNEUROSCI.1879-05.2005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spruston N. (2008) ။ ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ: dendritic ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Synaptic ပေါင်းစည်းမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။9206-221 10.1038 / nrn2286 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တံတားတီ, Sheng အမ် (2006) ။ dendritic ကျောရိုး morphogenesis ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol 16 95-101 10.1016 / j.conb.2005.12.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Trachtenberg JT, Chen က Knott GW, et al Feng တို့ G. အ, စိတ်ကောင်းသော JR, Welker အီး, BE ။ (2002) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ cortex အတွေ့အကြုံ-မှီခို Synaptic plasticity ၏ Vivo ပုံရိပ်အတွက်ရေရှည်။ သဘာဝ 420 788-794 10.1038 / nature01273 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tremblay ME, Lowery RL, Majewska AK (2010) ။ synapses နှင့်အတူ Microglial interaction ကအမြင်အာရုံအတှေ့အကွုံအားဖြင့် modulated နေကြသည်။ PLoS Biol ။ 8: e1000527 10.1371 / journal.pbio.1000527 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tropea ဃ, Majewska AK, Garcia က R. , Sur အမ် (2010) ။ Vivo အတွက် synapses ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒိုင်းနမစ်အမြင်အာရုံ cortex အတွေ့အကြုံ-မှီခို plasticity စဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူပတျသကျ။ ဂျေ neuroscience ။ 30 11086-11095 10.1523 / JNEUROSCI.1661-10.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsai ဂျေ, Grutzendler ဂျေ, Duff K. , Gan သည့် WB (2004) ။ Fibrillar amyloid အစစ်ခံဒေသခံ Synaptic မူမမှန်ခြင်းနှင့်အာရုံခံအကိုင်းအခက်ကျိုးစေပါတယ်။ နတ်။ neuroscience ။71181-1183 10.1038 / nn1335 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wilbrecht L. , Holtmaat အေ, Wright N. , Fox ကကေ, Svoboda K. (2010) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity cortical ဆားကစ်၏အတှေ့အကွုံ-မှီခိုအလုပ်လုပ်တဲ့ plasticity အခြေခံ။ ဂျေ neuroscience ။ 30 4927-4932 10.1523 / JNEUROSCI.6403-09.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Woolley CS, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, Frankfurt အမ်, Mcewen BS (1990) ။ သဘာဝကျကျအရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်ပွောငျးခွငျးဖြစ်ပေါ်။ ဂျေ neuroscience ။ 10 4035-4039 [PubMed]
Wyatt RM, Tring အီး, Trachtenberg JT (2012) ။ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုပုံစံကိုမဟုတျဘဲပြင်းအားနိုးကြွက်တွေမှာ dendritic ကျောရိုးတည်ငြိမ်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ နတ်။ neuroscience ။ 15 949-951 10.1038 / nn.3134 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Xu တီ, ယု X တို့မှာ, Perlik AJ, Tobin WF, Zweig ဂျာ Tennant K. , et al ။ (2009) ။ မော်တာအမှတ်တရများအမြဲတည်သောအဘို့အလျင်မြန်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် synapses ၏ရွေးချယ်တည်ငြိမ်။ သဘာဝ 462 915-919 10.1038 / nature08389 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယန်ဂျီ, ပန်အက်ဖ်, Gan သည့် WB (2009) ။ Stably dendritic ကျောရိုးရာသက်ပန်အမှတ်တရများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝ 462 920-924 10.1038 / nature08577 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ယု X တို့မှာ, ဝမ်ဂျီ, Gilmore အေ, ရီ AX လီ X တို့မှာ, Xu တီ။ (2013) ။ ephrin-A2 နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ cortical synapses ၏အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုတံစဉ်များကို Accelerated ။ အာရုံခံဆဲလျ 80 64-71 10.1016 / j.neuron.2013.07.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယု X တို့မှာ, Zuo Y. (2011) ။ ယင်းမော်တာ cortex အတွက် plasticity ကျောရိုး။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 21 169-174 10.1016 / j.conb.2010.07.010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang ကအက်စ်, ဘှိုငျဒျဂျေ, အန်တိုနီကေ, Murphy က TH (2005) ။ ischemia ၏ဒီဂရီအားဖြင့်န့်သတ်ထားထားပြီး Vivo အတွက် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းပုံအတွက်လျင်မြန်စွာ Reversible လုပ်အပြောင်းအလဲများကို။ ဂျေ neuroscience ။ 25 5333-5338 10.1523 / JNEUROSCI.1085-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zuo Y. , Lin ကအေ, Chang P. , Gan သည့် WB (2005a) ။ ဦးနှောက် cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက်ရေရှည် dendritic ကျောရိုးတည်ငြိမ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ အာရုံခံဆဲလျ 46 181-189 10.1016 / j.neuron.2005.04.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zuo Y. ယန်ဂျီ, Kwon အီး, Gan သည့် WB (2005b) ။ ရေရှည်အာရုံခံဆင်းရဲချို့တဲ့မူလတန်း somatosensory cortex အတွက် dendritic ကျောရိုးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သဘာဝ 436 261-265 10.1038 / nature03715 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]